jeudi, 08 décembre 2016 13:28
ISSTM – Ambondrona : Namoaka mpianatra 42 mianadahy
Mpianatra miisa 42 mianadahy nanaraka ny lalampiofanana “génie électrique”, “génie industriel » génie informatique » ary ny « bâtiment et travaux public » no nozaraina ny mari-pahazaina avy eo anivon’ny «Institut Supérieur des Sciences et Technologies » eo amin’ny oniversite Mahajanga. Andiany faha-3 ireto mpianatra nivoaka ireto taorian'ny taona 2012 nijoroan’ity sampam-pampianarana iray ity. Miara-miasa amin’ny oniversite Fianarantsoa ny ISSTM, mbola afaka manohy sy mampitombo fahaizana eny amin’ny anjerimanontolo izy ireo. Anisany nampiavaka ireo mpianatra vao nivoaka ireo ny famoronana rindrambaiko (logiciel) momba ny fitantanana.
Mahajanga : Tafajoro ny fikambanam-behivavy silamo
Ny lafiny sosialy sy ny fampandrosoana ny tanàna no fototra ijoroan’ity fikabanam-behivavy silamo Malagasy eto Mahajanga ity, izay tarihin’i Foundui Mamie. Araka ny atontanisa voalazan'ny fikambanana dia Silamo ny 15% n'ny vahoaka eto Madagasikara ka aty Mahajanga ny ankamaroany, ka izay indrindra no antony nametrahana voalohany ity fikambanam-behivavy silamo ity.
jeudi, 08 décembre 2016 12:33
AREMA : Toliara no hamaranana ny fankalazana ny faha-40 taonan’ny antoko
Ho avy eto Toliara ny sabotsy 10 desambra ho avy izao ny filoha teo aloha sady filoha mpanorina ny Arema, hamarana ny fankalazana mitety faritra ny faha-40 taonan’ny antoko. Ao amin’ny Pierre Barre Sanfil no hatao ny lanonana, fa efa nanomboka hatry ny omaly kosa ny fampirantiana ny tantaran’ny antoko sy ny filoha mpanorina azy.
jeudi, 08 décembre 2016 12:30
Maroadabo - Marovoay : Roa lahy voasambotra nikasa hivarotra taolampaty
Taolampaty 4 kilao no tratra niaraka tamin’izy ireo, teo ampitadiavana mpividy. Saika hamidy iray tapitrisa Ariary ny kilao no saron’ny polisy teo Ambalakida ny harivan’ny alatsiniainy teo. Mpanelanelana ihany izy ireto, fa hafa no namaky ny fasana tany amin’ny Fokontany Maroadabo – Soadanana Distrika Marovoay izay nakana ireo taolampaty ireo.
mercredi, 07 décembre 2016 21:41
Permis: Hifarana ity volana ity ny fanoloana azy ho biométrique
Hifarana amin'ity volana ity ny fanoloana ny taratasy fahazoan-dalana mitondra fiarakodia izay ho soloina Biométrique. Ankehitriny dia mitandahatra eny amin'ny Faritany ireo olona maro hanolo izany.
mercredi, 07 décembre 2016 10:06
Vehivavy Parlementera : Atrikasa momba ny miralenta sy ny fampandrosoana ifotony
Nanatanteraka atrikasa niaraka tamin’ireo Vehivavy Parlementera teny amin’ny Hôtel du Louvre Antaninarenina ny ONCD (Office National de Concertation sur la Décentralisation) ny alatsinainy 05 desambra 2016. Atrikasa izay nokarakarain’ny EISA (Institut Electoral pour la démocratie en Afrique). Ny miralenta sy ny fampandrosoana ifotony no niompanan’ny atrikasa. Izao no natao dia mba hanampiana azy ireo amin’ny fanamafisana traik’efa momba ny fampandrosoana ifotony. Ny Parlementera rahateo dia misahana ihany koa ny andraikitra mifandraika amin’ny fampiroboroboana ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana.
mercredi, 07 décembre 2016 09:35
ISTI : Mampafantatra ny momba ny sekoly
Nitondra fanazavana sy fampahafantarana teny amin’ny CCIA Antaninarenina ny teo anivon’ny sampam-pampianarana ISTI, izay oniversite vaovao. Ny fampianarana sy fanamafisana ny sehatry ny Informatika mba ho teknisianina ambony ny mpianatra mivoka ao no tena misongadina.
mercredi, 07 décembre 2016 09:31
ENS Ampefiloha : Seminera momba ny fampianarana
Nanomboka omaly ary mifarana anio ny seminera mahakasika ny fijerevana manokana ny fivoaran’ny politikan’ny fampianarana eto Madagasikara.
mardi, 06 décembre 2016 12:24
Mahajanga : Miparitaka ny entana lany daty
Eny amin’ny tsena Mahabibo no tena ahitana matetika ny entana lany daty. Ny dibera, vatomamy, sôkôla, famotsianify, menaka no tena mampitaraina ireo mpanjifa. Lasa poizina, miteraka aretina anefa ny fihinana ny sakafo lany daty raha ny nambaran’ny mpitsabo ary mety hiafara amin’ny fahafatesana izany raha tsy voatsabo ara-dalana ny olona iray nihinana sakafo lany daty. Miantso ny fandraisan’andraikitry ny ministeran’ny varotra, ny mpiaro ny zon’ny mpanfija ny mpanjifa manoloana ny fiparitahan’ireo entana lany daty fa tandindomin-doza ny fahasalamam-bahoaka amin’izao ankatoky ny fety izao raha izao no mitohy.
mardi, 06 décembre 2016 12:00
Sambava Nosiarina : Lavanila mbola tsy latsa-poitra dia efa misy mangalatra
Tantsaha iray handeha hiasa folera, no nahatsikaritra omaly maraina fa nisy nanapaka ka nangalatra ny lavanila tokony ho 22 kg. Ny volana desambra toy izao anefa no fanombohan’ny asa folera na fampitsehina ny vonin-davalina ary mbola afaka enim-bolana any ho any vao tokony azo hotazana ny lavanila. Hasomparana hanimbana ny lavanila aty SAVA sa efa misy mividy lavanila sahady amin’izao ka mahatonga izao halatra izao. Raha izao no mitohy dia tandindomin-doza ny lalampihariana lavanila malagasy.
Page 340 sur 457